FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY ALIKA AM-BAVA MAINTY - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny alika am-bava mainty
Nani the Black Mouth Cur amin'ny 9 volana— 'Alika matoky tena izy ho an'ny zazavavy kely toy izany. Tsy bossy, tsy matahotra na inona na inona. '
Lisitry ny alika mainty mifangaro mifangaro vava
Cur mainty amerikana
Cur mena vava mainty
Cur Black Black Mouth
Cur mainty mavo mainty
Ny Black Mouth Cur dia alika atsimo tsy azo iadian-kevitra, matanjaka sy mafy loha. Ny palitao dia tonga amin'ny alokaloka mavo, volo ary brindle isan-karazany. Ny BM Curs dia teraka miaraka amin'ny akanjo mavesatra kokoa ary ny sasany teraka miaraka amin'ny palitao maivana kokoa ireto karazana palitao roa ireto dia afaka miseho amin'ny fako iray ihany. Ny vava mahery tsy azo lavina dia mainty, mainty na mitovy loko amin'ny palitao. Matetika ny muzzles mainty dia aleony misy loko hafa izay heverina ho lesoka. Ny sofina dia salantsalany ary mihantona. Ny rambony dia mety ho lava. Betsaka ny teraka miaraka amin'ny rambony fohy na voahaingo. Lalina sy matevina ny tratra.
Ho an'ny olona mihaza dia tsy hisy alika hafa hanao. Anisan'ireo karohy fihazanan'ireto haza haingam-pandeha ireto ny lambo, bera, coon, squirrel ary serfa. Miaraka amin'ny lalao antonony, ny Vava Mainty dia misambotra ary mamono azy tsy misy fanontaniana. Tsy mihemotra mihitsy io alika io. Izy io koa dia mahay mamaky hazo sy manidina. Mandritra ny fihazana, ny làlan-kizorana dia misokatra na mangina, miaraka amin'ny tongolo na yodel dia ekena amin'ny hazo na amin'ny bay. Mahalana ny ozona no mivezivezy, na dia eo aza ny mihaza, mandeha an-tongotra mankany amin'ny sprint mandrakotra ny tany. Ireo alika ireo dia mazoto mpihaza , nefa afaka miara-miasa ihany koa omby . Nilaza ny mpiompy fa ny alika kely dia hanazatra ny tenany hamboly hazo, hiaro ary / na hanangona omby sy hanoratra omby amin'ny enim-bolana. Raha tsy misy fitsaharana sy mahery vaika izy rehefa miseho miasa io cur io dia tsara fanahy sy miaro amin'ny fianakaviany izy. Ny tsy fivadihana sy ny tsy fahatahorana no fanao mahazatra. Maniry mafy hampifaly ny tompony izy ireo. Tsara amin'ny ankizy, mila tompona tetikasa ity karazana ity a fahefana voajanahary amin'ny alika. Ny tompony dia tsy maintsy mametraka fitsipika ny alika dia tsy maintsy manaraka ary mifikitra amin'izy ireo. Tsy maintsy henjana izy ireo nefa tsy masiaka, mijanona milamina sy matoky tena . Ny alika dia tsy maintsy resy lahatra fa ambany olombelona izy amin'ny filaharany. Zava-dehibe indrindra fa io alika io dia mahazo fampiharana ara-tsaina sy ara-batana isan'andro. Ny ozona izay tsy misy fanatanjahan-tena dia mety ho lasa tady avo lenta. Rehefa tsy miasa amin'ny fihazana izy ireo dia tsy maintsy entina mandeha an-tongotra isan'andro any amin'izay alehany ombelahin-tongony eo anilany na ao ambadiky ny tompony , tsy eo alohany mihitsy toy ny mpitarika fonosana mandeha aloha. Manan-tsaina, azo vinavinaina, miaraka amin'ny toetra milamina, ny Southern Curs dia tsy mivadika amin'ny fianakaviany, manome ny ainy, raha ilaina, mba hiarovana azy ireo. fanombohana Training ny alika Mainty Vava vantany vao entinao mody. Ny fotoana fanofanana dia tokony ho fohy sy matetika mba tsy hahatonga azy ireo ho mankaleo. Tsy tokony hatokisana ity alika miasa ity biby fiompy tsy kaninina .
Hahavony: 16 - 25 santimetatra (40 - 64 cm)
Milanja: 45 - 95 pounds (20 - 43 kg)
chihuahua min pin mix puppy
Ny Black Mouth Cur tsy safidy tsara indrindra amin'ny fiainana an-trano.
pit bull terrier lab mix
Ny Black Mouth Cur dia alika mpihaza izay mila manao fanatanjahan-tena matetika, ao anatin'izany ny a dia an-tongotra lavitra sy lava . Ireo alika ireo dia marani-tsaina tokoa, ary na dia ny fihazakazahana lavitra indray mandeha isan'andro aza dia tsy ho ampy hitazomana azy ireo hipoka. Alika tena ara-batana izy io, raha tsy hoe mahatsapa ankizy na vehivavy marefo. Mila efitrano malalaka hihazakazahana. Manao izay tsara indrindra izy ireo ao an-trano miaraka amina tokotany lehibe hiarovana. Mpinamana be amin'ny jogging izy ireo. Ny tsy fahampian'ny fanatanjahan-tena dia mety miteraka olana isan-karazany amin'ny fitondran-tena.
Tokony ho 12 ka hatramin'ny 18 taona
Ankizy 5 ka hatramin'ny 10 eo ho eo
Ny volo fohy an'ny Black Mouth Cur dia mora karakaraina. Indraindray borosy sy borosy hanala volo maty sy malalaka. Mandrosoa raha tsy ilaina, satria ny fandroana dia afaka manamaina ny hoditra, miteraka olana amin'ny hoditra. Tazomy mba tsy ho be volo be ny lakandranon-tsofina ary hokapohina ny rantsan-tongotra.
shar pei amerikana staffordshire terrier mix
Ny faritra atsimon'i Etazonia dia be alika be karazana izay ampiasain'ny mpihaza sy mpanao fanatanjahantena eo an-toerana. Izy io dia Black Mouth Cur izay nitana ny andraikitry ny Old Yeller tamin'ny sarimihetsika Disney anarana malaza.
ABMCBA = Fikambanan'ny mpiompy vava mainty amerikana
FBMCBO, Inc. = Foundation Black Mouth Cur Breeders Organization, Inc.
NSBMCBA = Fikambanan'ny mpiompy vava mainty atsimo nasionaly
SBMCBA = Fikambanan'ny mpiompy vava mainty atsimo
Moonpie ilay tohatra mavo vava mainty cur ao anaty ala.
Tug the Cur am-bava mainty eo amin'ny 1 ½ taona eo ho eo
Bailey the Black Mouth Cur amin'ny 2 taona— 'Nanavotra io hatsaran-tarehy Bailey io tamin'ny fiarahamonina misy olona any Colorado Springs aho. Famindrana olona avy tany New Mexico izy. Tsy fantatro tamin'izay fotoana izay hoe inona ny taranany, hitako ny endriny mamy ary raiki-pitia aho. Nanomboka tena be izy manimba sy matahotra amin'ny zavatra rehetra fa amin'ny fitiavana be sy Training izy dia manana nivadika ho alika tsara indrindra ary namana akaiky tsy mivadika! Ka hendry ary te hampifaly foana. Faly tokoa aho manana azy amin'ny fiainako. '
'This is Tucker, a Black Mouth Cur, from the Carnathan Line. Tucker dia alika be fitiavana be hery. Tena ilaina izany nandeha isan'andro . Rehefa mandeha aminy isika dia tsy mandeha lavitra loatra ary eo imasony foana. Miara-miasa aminy isika fifehezana manamafy . Tiany ny milalao amin'ireo alikanay hafa, fa manana toetra manjaka . Tena manosika sakafo izy ary mahay mipetraka, mijanona, mandry, mipetraka amin'ny tongony aoriana ary mandady. Tucker dia mpamitaka! '
Buck the Cur am-bava mainty
Anarana: Seven Bone Keeton. Vorona: Cur Vava Mainty. Age: 4 taona. Hetsika: Niakatra hazo tamin'ny fofona ny hazo.
Borom-bava mainty Brindle
pit bull terrier boxer mix
Alika kely momba ny vavan'ny brindle mainty
Nani the Black Mouth Cur amin'ny 9 volana
Hijery ohatra misimisy momba ny Lava Mainty Vava
Sarin'ny vavan'ny mainty vava 1
Sarin'ny vava mainty 2
Lisitry ny alika mpiambina
Lisitry ny alika mitambatra Wales
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Papichon
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika omby amerikanina
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika scorkie
Fampahalalana sy sary avy amin'ny Daisy Dog
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika amerikana pit Bull Terrier
Lisitry ny alika mitambatra afovoany afg
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Panda Shepherd
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika kokila
husky mifangaro amin'ny poodle
labrador volo fohy amidy
alika mpiady boxe lahy sy vavy
Mpiandry ondry aostraliana afangaro kely
mifangaro beagle sy basset hound
lisitry ny alika amin'ny alika misy sary
mifangaro amin'ny beagle